‘स्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पु¥याउने दौरानमा छौं’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘स्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पु¥याउने दौरानमा छौं’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता August 8, 2018	0 203 Views
नमस्ते राप्ती यातायात प्रालिका अध्यक्ष
पछिल्लो समयमा दाङमा यातायात सेवा क्षे त्रको विकास र विस्तार उल्ले ख्यरुपमा हुदै गइरहे को छ । जससगै नया–नया प्रविधिका आधुनिक सार्वजनिक यातायात साधनहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहे को छ । से वा क्षे त्रको विकास र विस् तार, आधुनिक प्रविधि, स् तरीय सवारी साधनको बृद्धि हु“दै गइरहे पनि यात्रुहरुले अझै सर्वसुलभ र स् तरीय सार्वजनिक यातायात से वा पाउन सके का छै नन् । भित्रिदै आइरहे का प्रविधिमै त्री सवारी साधन र खुल्दै गइरहे का यातायात से वा क्षे त्रहरुले यात्रुमै त्री से वा, सर्वसुलभ, स् तरीय जे भने पनि यी सबै यातायात से वा क्षे त्रहरुको नारामै सीमित छन् । युगबोधकर्मी गिरिराज ने पालीले यात्रुमै त्री से वा, सर्वसुलभता, व्यवसायी र यात्रुहरुले भो ग्नु परिरहे को यातायात से वाको समस्यालगायतका बारे मा नमस्ते राप्ती यातायात प्रालिका अध्यक्ष वामदे व खनालसग गर्नुभएको कुराकानी यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
नमस्ते राप्ती यातायात प्रालिका गतिविधि के कस्ता चलिरहे का छन् ?
नमस् ते राप्ती यातायात प्रालि अरु भन्दा नया“ सो च, लक्ष उद्दे श्य बो की स् थापित भएको संस् था हो  । हामी वै शाखको ६ गते दे खि विधिवतरुपमा से वा शुभारम्भ गरी से वा थालनी गरे का हौ ं । नमस् ते राप्ती यातायात प्रालि नया“ भएकाले गाउ“दे खि शहरसम्मका सबै रुटहरुमा से वा थालनीको गृहकार्य गरिरहे का छौ ं । अर्थात यातायात से वाको पह“ुच पुग्न नसके का गाउ“ र विकटमा से वा विस् तार गर्ने सो चमा हामी लागिरहे का छौ ं । हामीले कसरी यात्रुहरुलाई स् तरीय से वा पु¥याउन सकिन्छ । जसका लागि के कुरा अपुग र अभाव रहन्छ भन्ने कुराको खो ज अनुसन्धान गरिरहे का छौ ं । से वामा सन्तुष्टि खो जिरहे का छौ ं ।
हामी नया हौ ंभन्नुहुन्छ, त्यो हो पनि तर से वाको स् तरीयता हे र्दा विगत र वर्तमानमा फरक दे खिन्न नि ?
तपाइले भन्न खो जे को कुरा मै ले बुझे ं । पछिल्लो समय दाङमा यातायात से वाको विकास र विस् तार निकै भएको छ । पहिला सवारी साधनको अभावमा कतै जानु प¥यो भने घण्टौ कुर्नुपर्ने स् िथति थियो  । अहिले त्यो छै न । पहिला एउटै गाडी एक ठाउमा जान्थ्यो  । अहिले एकै ठाउ“मा जाने गाडी थरिथरिका छन् । भन्नाले विगतको तुलनामा अहिले यातायात से वाको स् तर धे रै फे रिएको छ । तर स् तरीय से वाको विकास अझै हुन सके को छै न । त्यो व्यवसायीहरुको पनि कमजो री हो  । यात्रुहरुको पनि हो  । दुबै ले बार्गिनिङरहितको से वा हटाउने हो भने यो समस् या अन्त्य हुन सक्छ । तर व्यवसायीहरुलाई पनि यात्रु चाहिएको छ । यात्रुहरुलाई पनि राम्रो से वा थो रै पै सामा चाहिएको छ । यही तालमे ल मिल्न नसक्दा से वाको स् वरुप फे रिए पनि रुप उस्तै छ ।
जबसम्म यात्रु र व्यवसायीले बागेर् निङ से वा चाहन्छ तबसम्म यातायात से वा सुध्रिन असम्भव छ । हामीले यही समस्याको अन्त्य गर्न खो जिरहे का छौ ं ।
यातायात से वा क्षे त्रमा सबै कुरा उठ्छन तर गाउ र विकट क्षे त्र जहिले पनि छुटे का हुन्छन् ।
सबै ले के न्द्रमा सुगमतालाई रो जे का हुन्छन किन ? सबै का प्रायः रुटहरु सुगमता र शहरमै के न्द्रित छन्, तपाइहरुको के छ ?
बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो  । ने पालको विकास हे र्ने हो भने त्यही पुरानै छ । सडक पुल पुले सा कस् ता छन् त्यो मै ले यहा भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दै न । त्यसमा तपाई हामी सबै जानकार नै छौ ं । कुरा रह्यो सुगम र दुर्गमको , हामीले यातायात से वाको पहुच बाहिर रहे का गाउहरु र पहाडहरु जुन दिनदे खि से वा थालनी गरे के ा हौ ं । त्यही दिनदे खि नै गाडी जान सक्ने ठाउसम्म पहाड र गाउमा गाडी पु¥याएका छौ ं । त्यो मै ले भनिरहनुपर्छ जस् तो लाग्दै न । हामीले रो ल्पा, सल्यान, प्युठानका सदरमुकाम मात्रै हो इन । जिल्लाका गाउमा पनि से वा पु¥याएका छौ ं । जुन तपाइले भन्नुभयो सुगमता र शहरको कुरो त्यो आवश्यकताले मागे े को हो  । अब काठमाडौ ं, नारायणगढ, बुटवलमा धे रै यात्रुहरुको आवतजावत हुने भएकाले गाडी त्यहा“ बढी गएका हुन् । जहा यात्रु त्यहा से वा राम्रो मुख्य उद्दे श्य हो  । हामीले थाले का से वा सबै गाउ“मा पु¥याउने लक्ष हो  । तर सडक अभावका कारण हामीले सो चे का ठाउ र गाउमा से वा पुु¥याउन सकिरहे का छै नांै  । सबै गाउ“मा सबै ठाउ“मा यात्रुमै त्री स् तरिय से वा हाम्रो मूल मन्त्र हो  । यही प्रणका साथ हामी अघि बढिरहे का छौ ं ।
यात्रुमै त्री से वा सस्तो लो कप्रियताको नारा बनिरहे को छ नि ? तर यात्रुले पाउने यात्रुमै त्री व्यवहार कतै भे टिदै न किन ?
मै ले माथि पनि भनिसके ं, यात्रुमै त्री स् तरीय से वा हाम्रो मुख्य मकसद हो  । हामीले यात्रुमै त्री नारालाई नारामा मात्रै हो इन यसलाई सार्थक बनाउने प्रयास गरिरहे का छौ ं । यसको मुख्य चुनौ ती भने को चालक, सहचालकहरु श्रम र पे शा भने कै अनपढ र के ही काम नपाएकाहरुले गर्ने पे शा हो भन्ने सो च यात्रुमा हुनु र सवारी साधनमा आबद्ध कर्मचारीहरुमा चे तना अभाव हुनु हो  । तर हामी यही समस् याको अन्त्यका लागि कर्मचारीदे खि लिएर व्यवसायीहरुलाई बारम्बार यात्रुमै त्री व्यवहारका बारे मा प्रशिक्षण गरिरहे को छौ ं भने यात्रुहरुका सप्ठे रो अप्ठे रो का लागि निरन्तर फो नमार्फत गुनासो सुन्ने गरे का छौ ं । जसले गर्दा हामी अन्य व्यवसायीहरु भन्दा फरक र नया“रुपमा अघि बढिरहे े का छौ ं । जसका कारण यात्रुमै त्री से वाका नारालाई व्यवहारमा लागुगर्ने प्रयत्न गरिरहे का छौ ं ।
सार्थक बनाउछौ ं भन्नुभयो  । यात्रु र व्यावसायी दुबै को साथ चाहिएला नि ?
व्यवसायी यात्रुका लागि यात्रु व्यवसायीका लागि हो  । अर्काे कुरा व्यवसायी र यात्रुहरुको सम्बन्ध नङ र मासुको जस् तै हो  । हामीले से वा १७ वटाबाट शुरु गरे को से वा अहिले तीन महिनाको अवधिमा ८१ वटा बस पुगे का छन । यात्रु र व्यवसायीहरुको विश्वासले नै हामी निरन्तर अगाडि बढिरहे का छौ ं । हामीले यात्रुहरुको सुरक्षा र साथका यात्रु भलाई को षमा राखे को छौ ं । व्यवसायीहरुको लागि प्रवे श शुुल्क पहिला निकै चरम थियो । अहिले हामी २५ हजार रुपै या“ इन्ट्री शुल्क लिएका छौ ं । त्यसमा पनि १७ हजार रुपै या भलाई को षमा सम्भावित जो खिम बहनका लागि राखिएको छ । हामीले इन्ट्री शुल्कको आठ हजार रुपै या“ मात्रै प्रालिको व्यवस्थापन
खर्चका लागि राख्ने गरे का छौ ं । भन्नाले हामीले व्यवसायीको पनि लगानी र यात्रुको ज्यान सुरक्षित गर्न दो हो रो भूमिका निर्वाह गरिरहे काले यात्रु र व्यवसायीहरु प्रालिको से वामा आकर्षित र विश्वस् त बन्दै गइरहे का छन् । हामीले यात्रुहरुका लागि अनलिमिट बिमा से वा राखे का छौ ं । जसले गर्दा कुनै पनि जो खिमबाट
यात्रुहरु सुरक्षित रहून् भन्ने सो च हामीले निर्माण गरे का छौ ं ।
यो हामीले नमूनायो ग्य काम थालनी गरे का छौ ं । हामीले व्यवसायी र यात्रुहरुलाई सुरक्षा, सहुलीयत, स्तरीय से वा दिन सके नौ ं भने नमस् ते राप्ती यातायात प्रालिमा आबद्ध हुनुपर्ने किन ? यातायात से वा लिनुपर्ने किन ? जसले गर्दा हामी अरु भन्दा फरक र विश्वासको पात्र बन्न खो जिरहे का छौ ं । जो हामीले स् थापनादे खि हालसम्म पाइरहे का छौ ं । भो लिका दिनमा पनि यही साथ र विश्वसनीयता जो गाउन हामी निरन्तर प्रयासमा छौ ं । अर्काे कुरा हामीमा नम्बरका लागि दिन कुर्नुपनेर् अवस् था छै न । गाडीहरु हल्टे ज बस् नुपरे को छै न । हामीले कर्मचारी मात्रै हो इन, चालक सहचालकहरुलाई ड्रे सको व्यवस् था गर्दै छौ ं । यात्रु बाटामा शौ च गर्न प्रत्ये क घण्टा–घण्टामा शौ चालय भएका स् थानमा रो के र शौ च गराउन निर्दे शन गरे का छौ ं । अर्काे कुरा यात्रु र सवारी चालक र सहचालकहरुस“गै बसे र खाना खाजा खाने अभियान थालनी गरे का छौ ं । प्रत्ये क बुकिङ काउन्टरमा सुझाव पे टिका राख्ने तयारी पनि गरिरहे को छौ ं ।
सार्वजानिक यातायात से वा क्षे त्रको यात्रु बिमा अलि झञ्झटिलो छ भन्ने सर्वसाधारणहरुको गुनासो सुनिन्छ नि ? छै न ।
यातायात क्षे त्रले भो ग्नुपरे का समस्या के छन् नि ?
हामीले भो ग्नुपरे का समस् याहरु तमाम छन् । तर हामीले ती समस् याहरुलाई अवसरका रुपमा स् वीकार गरिरहनुपरे को छ । यातायात क्षे त्रको विकास र सुविधासम्पन्न सवारी साधनहरुको बृद्धि दिनानुदिन भइरहे का छन् । तर हाम्रा पूर्वाधार विगत २० वर्ष अघि जस् तो थियो , अहिले पनि त्यस्तै छ । लाखांै लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गरे का हुन्छौ ं । यात्रुले बागेर् निङ से वा लिन खो ज्छ । राज्यले सार्वजनिक से वा क्षे त्रमा लागे को लगानीमा निजी व्यावसायिकता दे खे को हुन्छ । यात्रुले व्यवसायीको मर्का बुझ्दै नन् । हामीले निश्चित भाडा तो के का छौ ं । तर यात्रुले यतिमा लै जानुस् भन्छन । सवारी साधन खरीदमा मात्रै हो इन । हामीले दै निक गुडाउ“दा तुलसीपुर दे खि काठमाडांै सम्ममा एक पटकमा न्यूनतम ४० हजार रुपै या“ खर्च आउ“छ । तर कहिले काही ४० हजार उठाउन पनि हामीलाई मुस् िकल पर्छ । हामी से वा गर्न बसे का हुन्छौ ं ।
अन्त्यमा केही छुट्यो कि ?
हामी नया सो च र लक्षका साथ सञ्चालनमा आएका छौ  । एक पटक सबै ले हामीलाई से वा गर्ने मौ का दिनुहो स् । हिजो का दिनमा भो ग्नुपरे का समस् या र असहजतालाई हामी हटाउन चाहन्छौ त्यसमा आम नागरिकहरुको साथ चाहे का छौ  । हामीले यात्रुको चित्त बुझ्ने गरी से वाको स्तरीयता गुणस्तरीयता दिन चाहिरहे का छौ ं ।
Previous: आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल सुनसान, बिरामी कुर्दै डाक्टर, वर्षमा १८२ विरामी
Next: अनुसन्धानमा शंका नगर्न प्रशासनको आग्रह